एक बर्ष मै प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा थपियो ७ हजार ऋण
काठमाडौँ । नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढेको छ । यो बर्षबाट एक नेपालीको थाप्लोमा ३१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । महालेखा प्रतिवेदनले नेपालीहरुको ऋणको भार बढेको देखाएको..
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल उपर गराउन र करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले माघ २३ मै..
सबैभन्दा महँगो : एमेजन मालिक सम्बन्धविच्छेदका लागि ३८ खर्ब तिर्न राजी
विविसी । संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेफ बेजोस र उनकी पत्नी मक्केन्जीको सम्बन्धविच्छेदलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो मानिएको छ। सम्बन्धविच्छेद गर्दा उनीहरूबीच ३५ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३८ खर्ब नेपाली..
एजेन्सी । चीनको सिचुवानका एक १२ वर्षे बालकले विगत ६ वर्षदेखि शारीरिक रुपले असक्त साथीलाई पिठ्युमा बोकेर स्कुल लैजाने र ल्याउने गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनले आफ्ना साथीलाई शौचालय लैजाने,..
६ किलो सुनको गहना लगाउने भारतीय नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ
काठमाडौं । गहना बनाएर सुन तस्करी गर्ने भारतीय समूहका चारजना त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। बिहीबार दिउँसो प्रहरीले ६ किलो सुनका गरगहना लगाएर नेपाल छिरेका चार भारतीयलाई पक्राउ गरेको..
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका ५४० नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले विभिन्न घटनामा संलग्न रहेको भन्दै वैशाखदेखि हालसम्म देशका विभिन्न भागबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। वैशाखमा ६१,..
काठमाडौं । मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरी २३ जना न्यायाधीश नियुक्ति र पदस्थापन सिफारिस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा..
काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिको मार्ग चित्र पहिल्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन शनिबार उत्साहपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ। सरकारले सम्मेलनका लागि ५० र निजी क्षेत्रका २५ गरी..
लगानी सम्मेलनमा उद्योग मन्त्री यादवले किन लिएनन् उपहार ?
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले लगानी सम्मेलनमा दिइएको मायाको चिनो अस्वीकार गरेका छन् । प्यानल छलफल कार्यक्रम सकिए पछि गैह्र आवसीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट छलफलमा सहभागीका लागि..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा आजबाट सुरु भएको दुइदिने लगानी सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गरेका छन् । त्यसअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सम्मेलनमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै नेपालले लगानी पर्खिरहेको..
जनकपुर बमकाण्डमा पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार साहसहित ७ जनालाई जन्मकैद
काठमाडौं । ६ वर्ष अगाडि जनकपुरमा भएको बम काण्डमा दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन सांसद एवं पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह (टक्ला)लाई जिल्ला अदालत धनुषाले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका..
काठमाडौं । सरकारले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा कूल ७७ वटा परियोजनालाई ‘शो केश’ मा राखिने भएको छ । चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा हुने सम्मेलनमा सरकारकोतर्फबाट ५० र निजी..
काठमाडौं । ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको भन्दै तत्कालिन अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध अख्तियारले नै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा..
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नेपाल सरकारका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई सिफारिश गरेको छ। सङ्खुवासभाका थपलिया सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव हुन्। यसअघिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त..
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अस्वस्थ, आइसियुमा राखेर उपचार हुँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अस्पताल भर्ना भएका छन् । अचानक स्वास्थ्यमा गडबडी भएपछि उनी शुक्रबार साँझ धुम्बाराही स्थित ह्याम्स अस्पताल भर्ना भएका हुन । उनको अहिले आइसियुमा राखेर..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सवार जहाज आकासमा फन्को लगाउनु (होल्ड) भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को कमजोरी औंल्याएको छ । समितिले..
अनमोलको फिल्म हेर्न बुवा र श्रीमती लिएर पुगे प्रधानमन्त्री ओली हलमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार साँझ परिवारसहित फिल्म हेर्न गएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली बुवा मनप्रसाद ओली र श्रीमती राधिका शाक्यलाई सँगै लिएर फिल्म हेर्न गएका हुन्। राजधानीको सिटी..
‘सिल्क रोड’ र हुवावे विवादसँगै चिनियाँ राष्ट्रपति सी यूरोप भ्रमणमा
बेइजिङ । व्यापारका लागि आधारभूत संरचना निर्माण आयोजना वेल्ट एण्ड रोड र विशाल चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेबारे देखिएका अस्पष्टतालाई चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको बिहीबारदेखि शुरू हुने यूरोप भ्रमणले प्रष्ट पार्ने..
सीके राउतको पार्टीको नाम जनमत, चुनाव चिन्ह अष्टदल, यस्ता छन् निर्णय
काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नाममा रहेको सीके राउत नेतृत्वको पार्टीको नाम फेरिएको छ । सोमबार सिरहामा बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार..
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । मन्त्री परिवर्तनका लागि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग समेत छलफल गरिसकेका छन्..
एजेन्सी । न्युजील्यान्डको क्राइस्टचर्चस्थित दुईवटा चर्चमा शुक्रवार भएको गोलीकाण्डमा मर्नेहरूको संख्या ४० पुगेको छ । चारजना बन्दूकधारीले दुई मस्जिदमा प्रवेश गरेर न्युजील्यान्डकै इतिहासको सबभन्दा खराब आतंकवादी घटना गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री..
काठमाडौं। सरकारले भारतका लागि नेपालका आवासीय राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपालका आवासीय राजदूत डा अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरिएको छ। आज सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री..
काठमाडौं । युरोपियन युनियनले करको कारण कालोसूची रहेको देशको सङ्ख्यामा वृद्धि गरेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स, बरमुडालगायतका दश देशलाई कालोसूचीमा राखेको बताइएको छ । युरोपियन युनियनका शक्तिशाली देश इटालीको विरोधको..
विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको घोषणा, अब के हुन्छ विप्लवलाई ?
काठमाडौं । सरकारले नेकपा विप्लव समूह आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव समूह भनी चिनिने नेकपा नामको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको..
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिले नेपाल सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग संस्थान, समितिका सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ ? यसको यकिन विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको..
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद सिके राउतको पाउमा पल्टिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । काँग्रेसले आइतबार बागलुङ बजारमा गरेको विरोधसभामा..
इथियोपियन विमान दुर्घटनाः नेपालीको पनि मृत्यु भएको पुष्टि, कुन देशका कति जनाको ज्यान गयो ?
काठमाडौं । इथपियोपियन एयरलाइन्सको आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा एक नेपालीको पनि मृत्यु भएको छ । एयरलाइन्सले १४९ यात्रुमध्ये एक नेपाली पनि रहेको पुष्टि गरेको हो । एयरलाइन्सका अनुसार एक युएनको..
एजेन्सी । केन्याको राजधानी नैरबीका लागि उडेको इथोपियन एयरलाइन्स दुर्घटना भएको छ। इथोपियन प्रधानमन्त्री कार्यलयका अनुसार आइतबार बिहान नैरबीका लागि नियमित उडान भरेको ७३७ बोइङ बिमान दुर्घटनामा परेको हो। विमानका प्रवक्ताले विमान..
काठमाण्डौंको बसुन्धरामा बिस्फोट, विस्फोटपछि आगलागी, गाडीमा क्षती
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा शंकास्पद बस्तु विस्फोट भएको छ । शुक्रबार साँझ साढे ७ बजेतिर ठूलो आवाजसहित शंकास्पद बस्तु विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ..
यस्तो छ ११ बुँदे सहमति गरेर सिके राउतले छाडे छुट्टै राज्यको माग
काठमाडैं । छुट्टै राज्यको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको सिके राउत नेतृत्वको संगठन स्वतन्त्र मधेश अभियान र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सो सहमतिको घोषणा आज राष्ट्रिय सभागृहमा..
Results 1994: You are at page 14 of 67